UPDATE: Duuliye waday Diyaarad Hawada Ku Jirtay oo geeriyooday, kadib maxaa dhacay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Duuliye waday Diyaarad Hawada Ku Jirtay oo geeriyooday, kadib maxaa dhacay?
UPDATE: Duuliye waday Diyaarad Hawada Ku Jirtay oo geeriyooday, kadib maxaa dhacay?
Nairobi (Halqaran.com)- Diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka Ruushka, laguna magacabo Aeroflot ayaa si degdeg ah u degtay kadib markii mid kamid ah duuliyeyaashii waday diyaaradda uu wadnaha istaagay.
Wakaaladda wararka ee Rushka ayaa kusoo warranatay in diyaaraddan oo ka ambabaxday magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka, kuna sii jeeday magaalada Anapa ay si degdeg ah ugu degtay garoonka caalamiga ee Platov ee magaalada Rostov-on-Don.
Duuliyihii labaad ayaa la sheegay in uu la wareegay diyaaradda, wuxuuna markii dambe codsaday in diyaaradda ay si degdeg ah u degto, kadib markii uu khalkhalay.
War qoraal ah oo ka soo baxaya shirkadda duulimaadyada ee Aeroflot ayaa lagu sheegay in markii diyaaradda la dejiyay xaaladda duuliyiha ay la tacaaleen dhakhaatiir joogtay garoonka, balse uu dhintay isgaoo lagu sii wada isbitalka.
“Qofwalba oo katirsan shirkadda Aeroflot waxaa uu aad uga naxay dhimashada saaxiibkeen, waxaana tacsi u direynaa qoyskiisa, saaxiibadii.” ayaa lagu sheegay warbixinta shirkadda.
Duuliyaha ayaa la sheegay in isagoo hawada ku jira uu wadnaha istaagay, taas na ay keentay in duuliyihii labaad uu ka fikiro sidii xaaladda loo dejin lahaa, ugana fikiri lahaa badqabka rakaabkii sarnaa diyaaradda.
Shirkadda Aeroflot ayaa sheegtay in caafimaadka duuliyaha dhintay uu ahaa mid wanaagsan, oo uu sameeyay baaritaan caafimaad kahor inta uusan duulin.
Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in wax dhibaata ah aysan soo gaarin rakaabkii saarnaa diyaaradda, walow aanan la garaneynin in dadka rakaabka loo sheegay xaaladda iyo waxa ay kaga falceliyeen.
Isla shirkadan Aeroflot ayay ahayd markii bishii Janaayo ay si degdeg ah ugu degtay galbeedka dalka Serbia, kadib markii qof rakaab ah oo cabsan uu isku dayay in uu afduubo diyaaradda.
Shakhsigaas ayaa markii dambe la xiray, waxaana dhamaan shaqaalihii diyaaradda iyo rakaabka ay si nabad ah ugu dageen magaalada Khanty-Mansiys.
Shirkadda diyaaradaha ee Aeroflot oo la asaasay sanadkii 1923 ayaa ah shirkad duulimaad oo ay leedahay dowladda Ruushka.